किन किन्दैछ सेनाले ७ हेलिकोप्टर ? - Koshi Online
किन किन्दैछ सेनाले ७ हेलिकोप्टर ?
सरकारले नेपाली सेनाका लागि ७ वटा हेलिकप्टर तथा जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ। विपत् व्यवस्थापन, हवाई सैनिक तालिम, भीभीआइपी उडान, कार्गोलगायत प्रयोजनका लागि सेनाले साना ठूला गरी ७ वटा सैन्य विमान तथा जहाज खरिद अनुमति पाएको हो । यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ।
अमेरिकाः बेल (६ सिट) र इकुरेल (४ सिट)